Ufumana njani uMxholo ophindwe kabini
I-Textbroker isungula isiQinisekiso soMxholo esiSimahla
NgoLwesine, Meyi 13, 2010 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Abanye oogxa bam baneziphumo ezintle ekuthengeni umxholo wokuvula isiza, ukubonelela ngezithuba ezithile ezinolwazi, okanye ukondla inkqubo eqhubayo yokubamba iziporho. Ukwakha umxholo omkhulu kunokuba ngumceli mngeni, ke inani leenkonzo ziye zavela ukunceda iinkampani ukuba zakhe ithala leencwadi.
Ukuba uthatha isigqibo sokuya cheap okanye uthenge amanqaku amaninzi ngobuninzi, ungabeka umngcipheko wokuthenga umxholo othathwe kwenye indawo kwiwebhu. I-Textbroker yinkonzo engabizi kakhulu enika umxholo. Kule veki basungule i-UNCOV.ER, isicelo simahla sokuqinisekisa ukuba umxholo wakho wahlukile.
I-UN.CO.VER inokusetyenziswa ngeendlela ezahlukeneyo:
Isicatshulwa esifakwe ngesandla (khuphela kwaye uncamathisele)
Indawo yeWebhu iphela, kubandakanya imimandla kunye nemimandla engaphantsi
Ngapha koko, unokujonga yonke iprojekthi yeWebhu ephindiweyo:
IsiQinisekisi sethu soMxholo esisodwa sinomsebenzi odityanisiweyo "wokurhubuluza" owenza imephu yendawo kuyo yonke iprojekthi ye-Intanethi kunye nemixholo ebhaliweyo. Emva koko i-UN.CO.VER ngokuzenzekelayo ithelekisa nganye yezi tekisi kwizigidi zamaphepha kunye neengxelo zibuye nomkhosi wedatha, kubandakanya nepesenti yamagama akhutshelweyo kunye namagama ngqo akhutshelweyo. Umsebenzi wenguqulelo yangoku ye-autostart ikunika ukhuseleko olupheleleyo ngaphandle kokuphakamisa umnwe. Xa iWindows iqala, ngokunjalo ne-UNCOV.ER, iqinisekisa ukuba umxholo wakho ukhangelwe ukuphindwa kabini ngosuku.
Ukuba usebenza nomnikezeli womxholo wesithathu, esi sixhobo kunokuba lolona tyalo mali lwakho. Into yokugqibela oyifunayo kukuba indawo yakho ichongwe njengendawo yogaxekile okanye ubekw 'ityala ngokupapasha umxholo okhuselweyo.
tags: ukungafaniuphando lweGoogleisiphumo sokukhangelaUvavanyo lwewebhusayithi
I-CMS Expo: IGem phakathi kweNkomfa yeNtengiso kunye neTekhnoloji eMidwest
Asinguye uMgxeki oBalayo